Touch Your Heart ( 2019 ) - Myanmar Asian TV
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Goblin ထဲက မင်းသား Dong Wook နဲ့ Yoo In Na ရဲ့ Ro တဲ့ကားလေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်….
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ Yoon Seo ( Yoo In Na ) က လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်…
သူအနေနဲ့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ကောင်းလို့ ကျော်ကြားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ရုပ်ရည် ရူပါနဲ့ ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးပေါ့…
သူက Chaebol မိသားစု ရဲ့ သား နဲ့ လဲ အရှုပ် အရှင်း ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ နာမည်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်…
အဲ့အချိန်မှာ Yoon Seo အတွက် ပြန်လည် နာမည်ရလာဖို့
နာမည်ကြီး ဇာတ်ကား သရုပ်ဆောင် ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြဖို့ လိုအပ်လာပြီး
သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဇာက်ကောင်က ရှ့နေ တစ်ဦးရဲ့ အတွင်းရေးမှုး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ…
အဲ့တော့ သူအနေနဲ့ ရှေ့နေရဲ့ အတွင်းရေးမှုး အတွေ့အကြုံက လိုအပ်လာတော့တာပေါ့…
Kwon Jung ( Dong Wook ) ကတော့ ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ အကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ ရှေ့နေ တစ်ယောက်ပေါ့…
မာနာကြီးပြီး အေးစက်တဲ့ အသည်းနှလုံး ပိုင်ရှင်လို သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
တစ်နေ့ ကုမ္ပဏီကနေပြီး မင်းသမီး Yoon Seo ကို အတွင်းရေးမှုး အဖြစ်နဲ့ Kwon Jung နားမှာ ခြောက်လ တာဝန်ပေးခြင်း ခံရတာတဲ့အခါမှာ…..
နောက်ပိုင်း အေးစက်တဲ့ နှလုံးသား ပိုင်ရှင်နဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသမီးလို့ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာ MMATV မှာ ကြည့်ရှု့ခံစားကြပါအုံး ခင်ဗျာ
Translators : Ken & Aye Pa Pa Htun
Encoder : Min Thein Kyaw
Episode 01 Episode 02 Episode 03 Episode 04 Episode 05Episode 06Episode 07
Starring: Lee Dong-wook, Lee Joon-hyuk, Shim Hyung-tak, Shin Dong-Wook, Yoo In-na,
Time ( 2018 )
MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ အသစ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ Time drama series လေးလာပါပြီနော်…. ဂျူလိုင် ၂၅ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေးနေ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ည ၁၀နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် ည၇နာရီခွဲ) မှာ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်…. တစ်ပိုင်းကို ၃၅မိနစ်နဲ့ တစ်နေ့ ၂ပိုင်း ပြသမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…. W Group ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့ သူဌေးသားဖြစ်တဲ့အပြင်…
Untouchable Lovers ( 2018 )
45 mins min
2018အစမှာထွက်ရှိလာတဲ့ Untouchable Lovers ဆိုတဲ့ series လေးကတော့ Tianyi Youfenng ရဲ့ Feng Qui Huang ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အခြေခံပြီးရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်…. **Review** လျိုကျိယဲ့ မင်းသား နန်းတက်လာသည့်အချိန်….လျိုကျိယဲ့ဟာ အသက်ငယ်ရွယ်ပြီးတရားလက်လွတ်နိုင်ထက်ကလူပြုတဲ့ မင်းတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကြောက်လန့်နေကြရတယ် ဒါ့ကြောင့် ထျင်ကျန်းဂိုဏ်းဟာ လျိုကျိယဲ့ကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် လျိုကျိယဲ့ရဲ့အချစ်ဆုံးအစ်မဖြစ်တဲ့ လျိုချူယွဲ့နဲ့ ရုပ်ဆင်တဲ့ ထျင်ကျန်းဂိုဏ်းရဲ့…
Genre: Fantasy, Historical, Romance, Wuxia
The Package ( 2017 )
The Package ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2017 ခုနှစ်မှာ JTBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Drama လေး တစ်ခုပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ယွန်းဆိုဆို ( Lee Yeon Hee) က ပြင်သစ်ခရီးသွားလမ်းညွှန်တစ်ယောက်ပါ … တစ်နေ့ သူမဟာ ခရီးစဉ်တစ်ခုရဲ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်အဖြစ် လိုက်ပါခဲ့ရပါတယ် … သူ့ခရီးစဉ်မှာ…
Riverdale : Season2( 2017 )
Season 1 မှာ Jason Blossom ရဲ့လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ Riverdale မြို့လေးဟာ Black Hood ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ လူသတ်သမားတယောက်ကို ရင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ် … တောင်ပိုင်း နဲ့ မြောက်ပိုင်း နှစ်ဖက်ကြားက အခြေအနေတွေဟာလဲ တစ်စနဲ့တစ်စ ပိုမို ဆိုးရွားလို့ လာခဲ့ပါတယ် … မြို့တောင်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲဖို့ Mr.Lodge ရဲ့…
Detective L ( 2019 )
40 m min
အခုတစ်လောပြသနဆေဲဖြစ်တဲ့ တရုတ်စုံထောက်ကားလေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရာဇ၀တ်မှုတွေ စည်းကားနေတဲ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို ရဲလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းက ရဲမေမလေး ချင်ရှောင်မန် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်…. ရှန်ဟိုင်းမြို့ရဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားလှတဲ့ စုံထောက် လုဖေးနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ပြီးတော့ ရဲစခန်းမှာလဲ အလုပ်အတူတူ လုပ်ကြတဲ့အခါ…. သုံးပိုင်းကို တစ်မှုနှုန်းနဲ့ ပြသထားပြီး စုစုပေါင်း ၂၄ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ စုံထောက် ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်……